आषाढ २०७८ ०१ मंगलबार 15th June 2021
०१ मंगलबार 15 Jun 2021
आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुने समय छ । कृषि तथा पशुपालनमा कम र व्यापारमा प्रशस्त फाइदा हुने योग छ । गरेका कामबाट राम्रै लाभ हुनेछ। तर, तत्काललाई धेरै श्रमपछि कम मूल्य पाइने योग छ । भएको आम्दानी र सञ्चित रकम समेत खर्च गर्नुपर्ला । लगानीको तुलनामा कम प्रतिफल पाइएला । तापनि, आजको प्रयत्नबाट दिगो फाइदा उठाउन सकिनेछ ।
प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । मातापिताको सहयोग प्राप्त होला । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ ।
सानातिना काममा महत्वपूर्ण समय बित्नेछ । आज सहयोगीहरूको साथ दिए पनि काम पूरा नहुन सक्छ । ठूलो सहयोगको आशा देखाउनेहरूले धोका देलान्, सचेत रहनुहोस् । धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट प्रतिष्ठा पाइनेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने समय छ । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ। तर, शारीरिक अस्वस्थता सम्भावना छ ।
सानातिना काम र घरेलु समस्यामै अल्झनुपर्ने देखिन्छ। सवारीमा समेत सावधानी अपनाउनुपर्ला। विगतका समस्या बल्झिन सक्छन्। स्वास्थ्यमा कमजोरी र उपचारमा खर्च हुने योग छ। विद्यामा कमजोरी र लेनदेनमा विवाद होला। प्रयत्न गर्दा व्यावसायिक काम सम्पादन हुनेछन्। सहयोगीहरूको मद्दतले काम बन्नेछन्। इष्टदेवको पूजा–उपासना गर्दा फाइदा होला।
आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ। अलि बाध्यताका काममा जुट्नुपर्ला। केही विवादमा समेत परिने योग छ, सचेत रहनुहोस्। दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ। सवारी साधनको प्रयोगमा अलि सावधानी अपनाउनुपर्ला। दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ।
व्यावसायिक काममा राम्रै फाइदाको योग छ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ फाइदाको योग छ। वैदेशिक यात्रामा पनि लाभ मिल्नेछ। द्वन्द्व, प्रतिस्पर्धा वा मुद्दा–मामिलामा विजयी भइनेछ। कर्मफल र अधिकारका लागि अलि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने देखिन्छ। शत्रुहरूको चलखेल बढ्नाले केही चुनौती सामना गर्नपर्ला। तापनि, प्रयत्न गर्दा मौकाको फाइदा लिन सकिनेछ।
प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। व्यापारमा भने कम मात्र फाइदा होला। केही कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ। सन्तान वा अनुयायी र मातृशक्तिको सल्लाह, सहयोगले आज विशेष फाइदा हुन सक्छ। केही अप्रिय समाचारले अलि चिन्ता बढ्न सक्छ। पढाइलेखाइमा प्रगति हुनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। खानपानको असावधानीले स्वास्थ्यमा बाधा हुने देखिन्छ।
आँटेका काममा केही बाधा हुन सक्छ। आफन्तजनसँग टाढिनुपर्ला। उच्च महत्वाकांक्षा र विगतका गलत निर्णयले काममा चुनौती आउने देखिन्छ। मातृधन, पशुधन र जमिनबाट फाइदा हुनेछ। परिवारजनको सहयोगले पनि लाभ उठाउन सकिनेछ। तर, अरूको सुझाव अप्रिय लाग्नेछ। महत्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा होला।
पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदाको योग छ। प्रतिस्पर्धी परास्त होलान्। सानो प्रयत्नले पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। कृषिकर्म र व्यावसायिक काममा भने केही चुनौती सामना गर्नपर्ला। सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् र काममा सोचेजस्तै सफलता मिल्नेछ। नयाँ काममा हात हाल्ने समय छ। प्रशस्त धन आर्जन गर्ने मौका छ।
रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ। विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ। मान–सम्मान बढ्नेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुने योग छ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने समय छ। प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन्। विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ। राम्रै फाइदा हुने दिन छ।
आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । अलि बाध्यताका काममा जुट्नुपर्ला । केही विवादमा समेत परिने योग छ, सचेत रहनुहोस् । दाम्पत्य जीवन सुखद तथा समृद्ध बन्ने देखिन्छ । सवारी साधनको प्रयोगमा अलि सावधानी अपनाउनुपर्ला । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ। व्यावसायिक यात्रा सम्भावना छ ।
वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ लिने मौका छ । काममा लगानीको समय छ । चुनौतीका बाबजुद नसोचेको काम बन्न सक्छ । स्थानान्तरण र टाढाको यात्रा सम्भावना देखिन्छ। केही मात्रामा खर्च बढ्नेछ । आलस्य पनि जाग्नेछ । धैर्यले काम लिने प्रयत्न गर्दा फाइदाको समय छ । छर–छिमेकमा भने केही असमझदारी बढ्ने योग छ । तापनि, प्रतिस्पर्धाबाट लाभ उठाउन सकिनेछ ।
१९७५ १९७६ १९७७ १९७८ १९७९ १९८० १९८१ १९८२ १९८३ १९८४ १९८५ १९८६ १९८७ १९८८ १९८९ १९९० १९९१ १९९२ १९९३ १९९४ १९९५ १९९६ १९९७ १९९८ १९९९ २००० २००१ २००२ २००३ २००४ २००५ २००६ २००७ २००८ २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३ २०१४ २०१५ २०१६ २०१७ २०१८ २०१९ २०२० २०२१ २०२२ २०२३ २०२४ २०२५ २०२६ २०२७ २०२८ २०२९ २०३० २०३१ २०३२ २०३३ २०३४ २०३५ २०३६ २०३७ २०३८ २०३९ २०४० २०४१ २०४२ २०४३ २०४४ २०४५ २०४६ २०४७ २०४८ २०४९ २०५० २०५१ २०५२ २०५३ २०५४ २०५५ २०५६ २०५७ २०५८ २०५९ २०६० २०६१ २०६२ २०६३ २०६४ २०६५ २०६६ २०६७ २०६८ २०६९ २०७० २०७१ २०७२ २०७३ २०७४ २०७५ २०७६ २०७७ २०७८ २०७९ २०८० २०८१ २०८२ २०८३ २०८४ २०८५ २०८६ २०८७ २०८८ २०८९ २०९० २०९१ २०९२ २०९३ २०९४ २०९५ २०९६ २०९७ २०९८ २०९९ २१००
बैशाख जेठ आषाढ साउन भाद्र आश्विन कार्तिक मंसिर पौष माघ फाल्गुण चैत्र
साईत / मुहरत
२६ द्वादशी 10
२६ पौष २०७७ 10th January, 2021
२७ त्रयोदशी 11
२७ पौष २०७७ 11th January, 2021
२८ चतुर्दशी 12
२८ पौष २०७७ 12th January, 2021
२९ पूर्णिमा 13
२९ पौष २०७७ 13th January, 2021
०१ प्रतिपदा 14
०१ माघ २०७७ 14th January, 2021
०२ द्वितीया 15
०२ माघ २०७७ 15th January, 2021
०३ तृतिया 16
०३ माघ २०७७ 16th January, 2021
०४ चतुर्थी 17
०४ माघ २०७७ 17th January, 2021
०५ पञ्चमी 18
०५ माघ २०७७ 18th January, 2021
०६ षष्ठी 19
०६ माघ २०७७ 19th January, 2021
०७ सप्तमी 20
०७ माघ २०७७ 20th January, 2021
०८ अष्टमी 21
०८ माघ २०७७ 21st January, 2021
०९ नवमी 22
०९ माघ २०७७ 22nd January, 2021
१० दशमी 23
१० माघ २०७७ 23rd January, 2021
११ एकादशी 24
११ माघ २०७७ 24th January, 2021
१२ द्वादशी 25
१२ माघ २०७७ 25th January, 2021
१३ त्रयोदशी 26
१३ माघ २०७७ 26th January, 2021
१४ चतुर्दशी 27
१४ माघ २०७७ 27th January, 2021
१५ औंसी 28
१५ माघ २०७७ 28th January, 2021
१६ प्रतिपदा 29
१६ माघ २०७७ 29th January, 2021
१७ द्वितीया 30
१७ माघ २०७७ 30th January, 2021
१८ तृतिया 31
१८ माघ २०७७ 31st January, 2021
१९ चतुर्थी 01
१९ माघ २०७७ 01st February, 2021
२० पञ्चमी 02
२० माघ २०७७ 02nd February, 2021
२१ षष्ठी 03
२१ माघ २०७७ 03rd February, 2021
२२ सप्तमी 04
२२ माघ २०७७ 04th February, 2021
२३ अष्टमी 05
२३ माघ २०७७ 05th February, 2021
२४ नवमी 06
२४ माघ २०७७ 06th February, 2021
२५ दशमी 07
२५ माघ २०७७ 07th February, 2021
२६ द्वादशी 08
२६ माघ २०७७ 08th February, 2021
२७ त्रयोदशी 09
२७ माघ २०७७ 09th February, 2021
२८ चतुर्दशी 10
२८ माघ २०७७ 10th February, 2021
२९ पूर्णिमा 11
२९ माघ २०७७ 11th February, 2021
३० माघ २०७७ 12th February, 2021
०१ द्वितीया 13
२१०१ 13th February, 2021
०२ तृतिया 14
२१०१ 14th February, 2021
०३ चतुर्थी 15
२१०१ 15th February, 2021
०४ पञ्चमी 16
२१०१ 16th February, 2021
०५ षष्ठी 17
२१०१ 17th February, 2021
०६ षष्ठी 18
२१०१ 18th February, 2021
०७ सप्तमी 19
२१०१ 19th February, 2021
०८ अष्टमी 20
२१०१ 20th February, 2021
१९३ दिन बाँकीपौष १०
तिलको लड्डु खाने दिन, त्रयोदशी
२१४ दिन बाँकीमाघ ०१
२७८ दिन बाँकीचैत्र ०६
राम नवमी, एकादशी
२८६ दिन बाँकीचैत्र १४
क्रिसमस१९३ दिन बाँकी
तिलको लड्डु खाने दिन२१४ दिन बाँकी
घोडेजात्रा२७८ दिन बाँकी
राम नवमी२८६ दिन बाँकी
मिति रुपान्तरण / Date Converter
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044
माथिको मिति रुपान्तरक यन्त्र प्रयोग गरेर आफूले चाहेको मिति बिक्रम संबत बाट एन्नो डोमिनि (बि. सं. बाट ए. डी.) तथा एन्नो डोमिनि बाट बिक्रम संबत ( ए. डी. बाट बि. सं.) मा रुपान्तरण गर्नुहोला।
© 2017 NepaliPatra.net. All Rights Reserved. Website Developed by Pradhan IT Solutions